သံစဉ် ရွှေဝမ်းဆက် - Forever Gems
Ks. 3,780,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Earing ER1 သံစဉ်ရွှေနားကပ်
Ks. 701,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Hand Chain HC29 သံစဉ်ရွှေဟန်းချိန်း
Ks. 1,990,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။